> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ Photos si a Motorola Droid Razr
E nwere ọtụtụ ihe na ọnọdụ ndị pụrụ ime ka ị na-atụfu foto gị na gị na Motorola Droid Razr ọ bụ na gị smartphone ke ofụri ofụri. O nwere ike ịbụ n'ihi a glitchy smartphone, a adọkpụ version nke sistemụ, ị weghachi ekwentị gị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọnọdụ, ị Flash gị ROM, ị gbanyere mkpọrọgwụ ekwentị gị ma ọ kasị nkịtị ndudue, ị na mberede ehichapụ foto.
N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, na ị chọrọ ndị photos azụ. Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) bụ gị ngwọta gị nsogbu. Nke a dị ike ngwaọrụ nwere ike naputa kasị, na-agaghị ekwu ọ bụla furu efu / ihichapụ data na gị smartphone, na otu onye nke ya ga-ekwe omume bụ na-agbake ehichapụ photos. Agbake gị ehichapụ photos na Dr.Fone maka android nwere arịatụghị mfe. The software e wuru na echiche nke na-enye ihe kasị mma ma dị mfe ọrụ ahụmahụ ka n'ji. All ị ga-mkpa ime bụ ụfọdụ ịpị na kọmputa gị na na gị smartphone na na ọ bụ ya, ndị fọdụrụ ga-a na-elekọta site Dr.Fone maka android.
E nwere otu ihe dị mkpa mkpa ka ị mara. Ị na-eji gị ama mgbe adịkwa na-ehichapụ photos, n'ihi na ọ bụrụ ọhụrụ ọ bụla data overwrite gị Nhichapụ photos site na ebe na ekwentị mkpanaaka na ebe nchekwa ebe gị ehichapụ foto ojiji na-, mgbe ahụ, Dr.Fone for Android nwere ike ọ gaghị enwe ike naghachi ya. Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke software ka nwere ihe echiche banyere ya.
A bụ ihe a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na otú naghachi ehichapụ kọntaktị site na Droid razr.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Motorola Droid razr gị na kọmputa
Mgbe ị arụnyere na software, biko amalite Dr.Fone for Android. Ị ga-enweta isi window n'okpuru-arịọ gị ka Jikọọ na ngwaọrụ gị, na oge a biko ikwunye-na gị Motorola Droid razr na kọmputa na-amalite mgbake usoro.
Nzọụkwụ 2. Kwadebe iṅomi gị Motorola Droid razr
Mgbe ejikọta ngwaọrụ gị na kọmputa, Dr.Fone maka android ga-amata gị ama na ga-akpaghị aka welite nzọụkwụ ọzọ. Pịa na mmalite button mgbe ọ bụla ị dị njikere. Ọ ga-ahụ na-amalite nyochasịrị ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3. achọpụta
N'oge a, Dr.Fone maka android ga-ịgụ isiokwu gị Motorola Droid Razr. Ọ ga na-na-sekọnd ole na ole.
Nzọụkwụ 4. Jisie smartphone
Erule mgbe ahụ, ị ga-ahụ a mmapụta na gị Motorola Droid Razr arịọ gị ka ị na-ekwe ka ngwaọrụ gị na-na ibu ọrụ mode. Dị nnọọ pịa Kwe Ka na gị Motorola Droid Razr wee pịa on Malite na kọmputa gị iji nọgide na usoro.
Nzọụkwụ 5. ịgụ isiokwu
N'oge a, Dr.Fone maka android na-ịgụ isiokwu dum ebe nchekwa gị Motorola Droid razr na na-agbake bụghị nanị gị Nhichapụ kọntaktị ma, ọ na-agbake ọzọ data na gị smartphone dị ka ihe atụ; foto gị, ozi, audios, wdg .. Dabere na ebe nchekwa size nke smartphone, ọ pụrụ ile a mgbe. Ya mere wetue na-eche maka Dr.Fone maka android ime ọrụ ya.
Nzọụkwụ 6. Preview na-agbake ehichapụ photos
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi niile nke gị photos, jide n'aka na Gallery igbe ke akpa Kọlụm na-nne Mmetụta na pịa na naghachi bọtịnụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịhụchalụ foto gị ma họrọ a kpọmkwem foto na ị chọrọ iji naghachi, biko tinye akara n'igbe ọzọ na foto ị chọrọ iji naghachi na pịa naghachi.